Yenza i-WordPress izihloko zakho ngokulula ngokulula | Martech Zone
Ndakhangela iplagi okanye ikhowudi yokutshintsha izihloko kwiphepha lethu lasekhaya DK New Media ukonwaba kwaye unxibe iphepha lasekhaya kancinci. Ingxaki kukuba bendinomxholo osetyenzisiweyo onamacandelo athile omgca wethegi kunye nenkcazo yesiza, kwaye andivanga ngathi ndiyawuqhekeza kolu hlengahlengiso.
Ukwenza oku ngeeplagi kunye nokulungiswa kwemixholo kuya kufuna ukusetyenziswa okumnandi Iplagi yamasimi aPhucukileyo aPhambili kunye neSongezo soMhlaba wokuPhinda -Nantsi indlela ebesiya kwenza ngayo kubaxhasi. Kwindawo yethu, nangona kunjalo, sihlala sithatha iindlela ezimfutshane kwaye le khowudi incinci isebenza nje!
Ngokusisiseko, ungena nje njengezihloko ezininzi ebaleni uze uzihlule ngomlinganiswa othile (ndisebenzisa uphawu "|"). Emva koko unokusebenzisa umsebenzi wokuqhuma we-PHP obeka zonke iintloko kuluhlu kwaye usebenzise umsebenzi wokukhutshwa kwe-PHP ukushenxisa iodolo yoluhlu, emva koko ubonise isiphumo sokuqala. Ubonisa kuphela umphumo wokuqala ... ngale ndlela ukuba unomphumo omnye kuphela uya kubonakaliswa ngokufanelekileyo!
Kumxholo wethu apho umxholo uboniswa khona, simane sibeka umxholo wokubhaliweyo kunye nale khowudi ilandelayo:
Ukuba ufuna ukuzonwabisa, ungakudlulisa oku njenge umahluko ngokwesiko kuGoogle Analytics kwaye uvavanye ukuba zeziphi ezona zihloko zenza ezona zilungileyo!
tags: dubulaphpYenza ngokungafaniyojikelezisa umxholoukuyekatshintsha umxholoumxholo wegama
I-Litmus: Ngaba abantu banokuyifunda i-imeyile yakho?